FAA'IIDADA LAGA HELO LIIN-DHANAANTA - Awdinle Online
Liin dhanaantu waxaa laga helaa faa’idooyin badan oo halkaan lagu soo koobi karin,
laakiin waxaan ka hadli doonaa insha’llah faa’idooyinka badanaa la isku waafqasan yahay:
Liin dhanaantu waxay daawo u tahay cudurka cirid dhiigga “Scurvey”, xanuunkaan oo aad ugu badan badmaaxayaasha, waxaa lagula taliyaa inay liin dhanaan ku fialan ay u qaataan safarradooda.
Qolofta liin dhanaanta waxaa ku jiro maaddo loo yaqaano “Tangeretin”, tan oo la hubiyay inay daawo u tahay xanuunka laleemada ee Parkinson’s disease.
Liin dhanaantu waxay xal u noqotaa cabburka iyo oksajiin yarida, waxayna siisaa jirka awood uu oksajiin yar ku noolaan karo, arrintaan oo la ogaaday markii uu ku guuleystay ninkii ugu horeeyay oo gaara cirifka buurta “Mt. Everest” oo sheegay inuu liin dhanaan kaliya cuni jiray inta uu safarka buurta ku sii jiray!.
Liin dhanaantu waxay nuursiaa maqaarka qofka, waxaana loo adeegsadaa in jirka looga baab’iyo haaraha wajiga noocyadooda kala duwan, waxaana taariikhda la sheegaa in dadka shiinaha ay caruusooyinka ugu qubeyn jireen liin dhanaanta dhowr maalmood ka hor inta aan la aroosin!, waana arrin cilmibaarista lagu arkay in liin dhanaanta ay maqaarka ka baab’iso haaraha, iftiin u kordhiso, unugyada dhintay ay ka qaaddo,
laalaabyada maqaarka samaysto inay yarayso iyo waxyaabo kale.
Qore Dr. Amiin
Previous articleWasiirka arrimaha Gudaha oo amar ku bixin in deg deg loosoo xulo Xildhibaanada Galmudug
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo u Safri doona Addis Ababa